Mividy Lensa miloko maitso? - Manafatra izao ho an'ny € 13.99 ihany! - Opticcolors
Tranga momba ny lesoka
Araho ny baikoo
Diso ny sarinao
Tehirizo ny 40% ankehitriny!
Loko lokoLoko loko
Tranga momba ny lesokaTranga momba ny lesoka
Laso tsiranokaLaso tsiranoka
Araho ny baikooAraho ny baikoo
€ 14,99 € 25
Opticcolors Ny lente dia namboarina avy amin'ny Phemfilcon malefaka ary mora ampiasaina. Ny lelanay loko koa dia misy zavatra avo lenta momba ny rano, ka izy ireo dia manentana ny masonao ary hitazona azy ireo ho salama. Amin'izay dia hahazo endrika vaovao sy vaovao ianao.
Opticcolors Ny lefona dia mampanantitrantitra ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ny mason'ny maso, mahatonga ny endrika manintona kokoa. Ireo lente ireo dia tonga lafatra ho fanohanana fety, andro manokana na fampiasana manokana isan'andro.
Product Type: lente loko
fanoloana: 1 volana
Karazana lens: malefaka
Fonosana fonosana: Livatra 2 (1 tsiroaroa)
Vakana kurva: 8.6 MG
savaivony: 14.2 MG
Ny votoatin'ny rano: 38%
Manaova lesoka fotoana: 14 ora
Milana misy: 12 loko
Shipping fomba Ora nanomezana
Alemana Express Track & Trace 1-6 andro fiasana
Track Track and trace 7-15 andro fiasana
USA Express Track & Trace 2-6 andro fiasana
Irak'izao tontolo izao
Tsindrio Eto hanaraka ny kaomandinao.
Ireo singa izay mety hisy fiatraikany amin'ny fotoana anaterana
Antony maromaro no mety hisy fiantraikany amin'ny ora fanaterana. Mety hivily lalana ohatra ny kaomandinao noho ny:
Andro fialantsasatra eo an-toerana
Fifandraisana amin'ny fomba amam-panao any amin'ny firenena itodiana
Fitokonana na hetsika manokana hafa ao amin'ny firenena itodiana
Ny adiresy nomenao anay dia tsy feno na tsy marina
- Miresaha amin'ny mpitsabo lenta mifandray aminao alohan'ny hampiasana fanafody maso mandritra ny fitaovanao ny làlam-pifandraisana.
- Aza ampiasaina raha simba misy tombo-kase tampoka hita maso.
- Raha misy fanelingelenana maharitra ny maso, esory ny fampiasana kokeateley, esory ny masom-bava amin'ny masony ary manontania amin'ny mpangataka laha-fifandraisana anao.
- Avelao tsy ho an'ny ankizy daholo ny vokatra momba ny fikarakarana lensa.
- Aza esorina ny sombintsombiny amin'ny tranga mandritra ny fitahirizana lensa fifandraisana.
- Aza avela hikasika izay rehetra eny ny tendron'ny nozzle.
- Manoloana foana takelaka vita amin'ny tavoahangy rehefa ampiasaina.
- Aza sasana amin'ny rano mivantana amin'ny rano amin'ny tariby.
- Mila fahazoan-dàlana avy amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny solomaso ianao hampiasa ireo lantom-pifandraisana ireo.
- Ny tranga fitahirizam-bolanao dia tokony diovina tsy tapaka ary ovaina matetika araka ny natolotry ny mpampihatra lenta fifandraisana anao.
- Mba hahazoana antoka fa tsy voarohirohy ny fiarovana ny maso dia tsy tokony hampiasa ny vahaolana intsony ianao. Raha voatahiry mandritra ny 7 andro mahery ny solomaso ao anaty vahaolana, dia asaina averinao ny fomba famonoana otrikaretina.
- Aza ampiasaina aorian'ny datin'ny lany daty voatondro amin'ny vokatra.
Miorina amin'ny fanavaozana 3 Soraty ny famerenana
Opticcolors ny mpiara-miasa amiko ny lenta loko sy ny fitaovana!
Araho izahay ao amin'ny media sosialy mba hijery ny vokatr'ireo mpanjifanay, vaovao sy ny maro hafa.
Fepetra sy fepetra ankapobeny
Misoratra anarana handray vaovao farany, miditra amin'ny fifanarahana manokana, ary maro hafa.
Zo rehetra voatokana.
Findran'ny banky SEPA
Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu